Mr. huolang waa sumcad caan ku ah dukaanka waaxda Shiinaha iyo warshadaha tafaariiqda. Waxay diiradda saareysaa R&D, naqshadeynta, sahayda, iyo iibinta. Ka soo qaadista badeecadaha adduunka qiimo jaban iyo adeeg aad u fiican si loo daboolo baahiyaha macaamiisha. Mr. huolang waa in ka badan 600+ silsilad dukaanka waaxda guriga.
Yiwu Trading Lang Trading Co., Ltd. wuxuu ku qotomaa Yiwu, Zhejiang, China. Iyada oo laga faa'iideysanayo Yiwu, oo ah xarunta ugu weyn ee qaybinta badeecadaha yaryar ee adduunka, waxaa taageeray suuqa ugu weyn adduunka, Yiwu Trade City, waxayna si adag u qabataa macluumaadka badeecadaha caalamiga ah iyo silsiladda sahayda caalamiga ah. Waxay noqotay astaanta horseedka u ah warshadaha tafaariiqda ee waaxda Shiinaha.
Iyada oo la raacayo fikirka ganacsiga ee “marka hore macmiilka, marka hore adeegga” iyo “caawinta dadka kale si ay u gaaraan iyaga” sida qiimaha dhaqanka shirkadu, Mr. Zhilang waxaa ka go’an in uu siiyo dukaameeysatada adeeg wax-iibsi oo hal mar ah dukaamada waaxda. Mudane Shi Lang wuxuu kaloo aasaasay sawir summad leh “tayo sare leh, tayo dhammaystiran, qiimo qurxoon iyo ku -habboonaan” maskaxda macaamiisha, taas oo abuurtay saamaynta Mr. Shang Lang ee iibinta tafaariiqda ee dukaamada waaxda Shiinaha.
Alaab -qeybiye tayo leh
Jardiinada warshadaha oo dhan
Mr. Langer wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa “laba dukaan oo waaxda yuan” ah sannadkii 1998. Kaddib ku dhawaad ​​20 sano oo horumar ah, wuxuu si dhow u dhisay agagaarka aasaaska iyo qoto -dheeraanta silsiladda sahayda. Maanta, Mr. Lang Lang wuxuu aasaasay “waax dhammaystiran” store super model ”oo isku daraya badeecadaha yar yar Yiwu iyo ilaha wax soo saarka badeecadaha yar yar ee Zhejiang si ay u siiyaan dadka wax iibsada alaabada iyo adeegyada ugu qiimaha badan. Markii la furay dukaankii waaxda isku -dhafan ee ugu horreeyey 2006, isla sannadkaas ayaa diiwaangashan summaddii "Juhui Aijia", iyo aasaaskii Mr. Lang Lang Trading Co., Ltd., waaxda dukaanka ee shirkadda tooska u ah iibinta dukaanka weyn
oo leh sumadda "Jie Hui Aijia" ayaa bilaabatay inay dalka oo dhan gasho. Sannadkii 2013, shirkaddu waxay ka samaysay baarkin dhammaystiran oo isku -dhafan, bandhig, bakhaar, maareynta silsiladda sahayda iyo cilmi -baaris badeecadeed oo madaxbannaan iyo horumarin ah oo ku taal Yiwu, Zhejiang, China. Sannadkii 2016, Mr. Langer waxaa la guddoonsiiyay “Tobanka Kobcin ee Kobcinta Ganacsiga ee Warshadaha Tafaariiqda ee Shiinaha” oo uu siiyay Xiriirka Ganacsiga Shiinaha. Bishii Marso 2017, waxaa la guddoonsiiyay "Qiimaynta Deynta Ganacsiga ee Waaxda Shiinaha AAA Credit Enterprise", "Tobanka Nooc ee Ganacsi ee ugu sarreeya Shiinaha" bishii Maajo, iyo "2017 Ganacsiga Ganacsiga Shiinaha ee Tobanka Sare ee ugu sarreeya" bishii Nofembar. Sannadkii 2017, Mr. Langer wuxuu furay kor u qaadista istiraatiijiyadeed ee bakhaarka bulshada ee dhismaha ganacsiga, waxayna la kaashadeen Wanda Plaza, Wuyue Plaza, Baolong Plaza, Jiayuan Plaza, iwm, iyo dukaamada leh sumadda "Mr.huolang Vendor". , tirada bakhaarrada dalka ayaa gaaray in ka badan 680, oo ka kooban 26 gobol iyo magaalooyin dalka oo dhan ah, oo u adeega kumanaan macaamiil ah.
·Mr. huolang si rasmi ah ayaa loo aasaasay ..
·Mr. huolang wuxuu qaataa "Mr. Huolang" oo ah astaanta wuxuuna bilaabayaa tusaalaha franchise ..
·Shirkaddu waxay u guurtay baarkin cusub oo dhammaystiran si ay u xaqiijiso maamulka isku dhafan ee xafiiska, hoolka bandhigga, bakhaarrada, iyo silsiladda sahayda ..
·Tirada bakhaarradu waxay kor u dhaafeen 500, kuwaas oo badiyaa furay suuqa galbeed oo Kashgar ay xarun u tahay. waxay sidoo kale cagaha ku haysaa suunka dhaqaalaha "Belt and Road" ..
·Waxaa la aasaasay Xarunta Hawlgalka Waqooyi-bari, Mr. huolang wuxuu u wareejiyay xaafadaha 5-aad ee Magaalada Ganacsiga Caalamiga ah. Lixda bilood ee xigta, Xarunta Hawl-galinta Waqooyi-Galbeed ayaa si rasmi ah u furtay ..
·Mr. huolang Business School waxaa la aasaasay si uu u dhiso xarunta kaydinta ee casriga ah ..
·Mr. huolang wuxuu maal -galiyaa baarkin warshadeed oo dhammaystiran oo ka badan '65,000 mitir murabac ..